Somaliland oo albaabkasta u gaarcaday inay Hesho Aqoonsi | maakhir.com
Somaliland oo albaabkasta u gaarcaday inay Hesho Aqoonsi
Hargaysa:- Maamulka la magac baxay Somaliland ayaa albaabkasat oo Caalmaka ku yaala waxay u Garaaceen sidii ay u heli lahaayeen Aqoonsi ah inay ka go”aan Somaliya Inteeda kale waxan Safaro ku maraya dibada Ninka somaliland hogaamiye ee Riyaale Kaahin.
Maamulka Somaliland ayaa mudooyink waxay xusul duub ugu jirtay sidii ay Beesha Caalmka Aqoonis uga heli lahayd balse arinkaasi ayaa waxa ku Gacan saydhay dhamaanba Aduun waynaha iyaga oo Somaliland ku tel maamay Qayb ka mid ah Somaliya inay yihiin isla markaana aysan ka Go”i karin Somaliyada kale.
Dalka Ugu badan ee Somaliland haba yaraatee diiday inay Somaliya ka Go”Do ayaa waxa ka mid ah Dalka Maraykan.
Sarkaalad sare oo ka mid ah Laanta uqaabilsan Mareykanka arimaha Africa ayaa sheegtay in la kulankii ay la kulmeen Madaxweynaha Somaliland ,ayna aheyn mid aqoonsi balse ay ahayd in lays dhaafsado Sida ugu bahoon ee Soomaalidu umidoowbi karto.
Sarkaal kaasi waxa uu sheegay inay Somaliya aqoon san yihiin inay Dawlade ka jirto taasi oo uu Madaxwayne u yahay C/laahi Yuusuf Axmed.
Arintaas ka soo yeedhay Beesha Caalamka ayaa waxay Dhabar jab ku tahay Maamulka Riyaale Kaahin isaga oo shacabka Marin habaabinaya kuna una sheegay inay dhawaan helayaa Aqoonis.
« Taliyaha ciidanka Maamulka Maakhir Ka hadlay xaadalaha amaanka
Nuur Cadde oo ku baaqay wada hadalo »